Dubai - Zonke Izinto Ezinkulu Nezincane - Uhambo lukaWendy Louise Nog e-UAE
Dubai - Zonke Izinto Ezinkulu Nezincane
Kukhona indawo kulomhlaba okuthiwa "Dubai"
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at Kwangathi 11, 2019
Mina nendodakazi yami encane sahlala kuvulandi elingaphandle lekhefi elingena kuhlanganiswa ngophudingi namakhekhe awo yonke imibala ku-uthingo futhi abheke ichibi lokuphumula elingezansi. Ngezansi ngezansi. Besisezingeni lesikhombisa lamakhofi ulayini onqenqemeni lweDubai Mall. Futhi njengoba sasihlala futhi siphefumula emoyeni, futhi samangala ukubona okuncane okuwolintshi ukuthi isivunguvungu sesihlabathi esikude sanika izakhiwo eziseduze. Ngokokuqala ngqa emavikini amabili, sazizwa sikhululekile ngokuphelele.
Uhambo lwethu olusuka eCalifornia ukuyohambela umndeni eKolkata lwaluphethwe yizona izitha eziphikisayo kakhulu ohlangabezana nazo lapho sihamba noma kuphi eNdiya, futhi sase sifikile Dubai unyakaziswe kahle. Ukuba ngowesifazane ohamba yedwa nentombazane encane wayenayo kwakudinga ukuqwashiswa okugxile okwakunzima. Sasijabule kakhulu ukuthi sifike eDubai, futhi sibona iBurj Kalifa ngesikhathi sifika.
Sithatha isitimela esihlanzekile esivela ku-the I-airport ye-Dubai, uphume esitobhini esikhulu sezitolo ezinkulu. Bese ngihamba emikhondweni engapheli engapheli yemigwaqo eseceleni size safika lapho sasiya khona futhi sathola i-cafe lapho sasihlala, siphumule futhi singene kulomhlaba omusha. Njengoba sasihleli elangeni lalele umculo wamahhala osizungezile. Ngazizwa zonke izinkathazo, ukucindezela kokuhamba, ukukhathazeka nganoma yini, kwancibilika ngokuphelele. Sahlala lapho simangele, sabonana ndawonye lowo muzwa ongaba khona eDubai kuphela.
I-Dubai ikhule ibe yindawo ehambelayo yokuvakasha!
Injongo yami ngokuvakashela leli dolobha elihle kakhulu bekuzokwazi ukuxhumana neklayenti lami leWebhusayithi, i-Celebrity Persian Chef Ariana Bundy, ovula indawo yokudlela yase-Persia, "Ikhishi lase-Ariana's Persian" eRoyal Atlantis Ihhotela nezindawo zokuhlala ezimangazayo. Ukudla kwakhe kwePheresiya kufakwa nge-rose, isafroni, i-pistachios, futhi kuzoba nemenyu emangalisayo yezindlela zakudala zokupheka. Uvuselela indawo yokuhlala eneminyaka eyi-300 a indawo ehlukile yokusebenzela njengesikole sokupheka nendawo yokuhlala.
Indaba yakhe ingenye lokho kukhombisa udaba lweDubai. Kuyinto indawo lapho ungaphupha khona, wenze ukuthi lawo maphupho afezeke. Yindawo yokudlala yabakhi bezakhiwo nabathuthukisi, abapheki nabaklami, abaculi nabahambi, futhi noma yini ongayicabanga kungenzeka, kufaka phakathi ukudala imephu yomhlaba neziqhingi. I-future Bright ihlonishwe kakhulu ngokuthi imphelezele kulolu hambo, futhi njengesikhungo sokuqamba amawebhusayithi esakha ukudla, lokhu bekungukuvakasha okhetheke ngendlela ekhethekile.
Sakwazi ukuthatha kalula Uber yonke indawo, futhi wonke umshayeli esasinaye wayenomusa, enobungane, futhi evulekile ukwaba ngemvelaphi nemindeni yabo. Sazizwa siphephe ngokuphelele. Njengabahlali abaningi baseDubai, abashayeli bonke babevela kwenye indawo, okufana kakhulu nokuhlala kwethu eCalifornia.
Umphathi wethu onomusa wasinikeza ukuvakasha kwe indawo esasihlala kuyo, futhi bekungamangaza ngokomqondo ukwehlela omunye ngokuzumayo bese kuvela elinye iqembu le-100 skyscrapers. The ukwakhiwa kwezakhiwo ezintsha kwenzeka yonke indawo, futhi bekujabulisa ukubona nokucabanga ukuthi bazoba njani uma sebeqediwe ngokususelwa emigodini engenakwenzeka ebonakala sengathi iyaqhamuka ngaphansi kokhonkolo.
Yidla endaweni yokuhamba ngezinkanyezi ezinhlanu
Sibe nesidlo sakusihlwa eJumeirah Al Qasr, indawo yokuphumula enezinkanyezi ezinhlanu, futhi yahlala egumbini lokuphumula elibheke emiseleni eboshwe ngezihlahla zesundu. Sonke isakhiwo sakhiwe ngemabula enhle nogogo. Ukudla bekunambitheka ngendlela emangalisayo, kanti newayini alinakuthengwa ngokuphelele, okuyinto edumazayo futhi okuhle ngasikhathi sinye.
I future futuristic I-World Expo izoba seDubai e-2020, kanti nokwakhiwa sekuqalile ukwakhiwa, namazwe akha izethulo ezimangazayo zobuciko bawo bokwakha. Kuyalingwa ukufaka yonke imininingwane yesikhathi sethu esisichitha ukuhlola idolobha elimangalisayo laseDubai, kepha kumnandi kakhulu ukuzithola. Nakanjani sizobuya, futhi ngeke silinde ukunambitha u-ayisikhrimu owafakwa ku-safroni kusuka I-Ariana indawo yokudlela ebheke umkhathi onosawoti wamanzi asePersian Ghuba.
Xhumanisa Iwebhusayithi Ye-Ariana Esikhundleni Sethu:
UWendy Louise Nog Umsunguli, uMxazululi Wezindlela, I-BrightPhone Ezayo: 415-275-0970
Ikheli: 100 Shoreline Highway, Building B, Suite 100
IDubai City Company manje ihlinzeka ngemihlahlandlela emihle nolwazi eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje usungathola iziqondiso, amathiphu nokuqashwa e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.